Xoogag Jihaadi ah oo weeraray saldhigga ciidanka Jabuuti ee magaalada Beled Weyne.
Xildhibaanad sheegtay in ay si dhuumasho ah ku tagtay Suuqa Bakaaraha Muqdisho.
Wasiirkii difaaca Itoobiya iyo xubno kale oo shaqada laga eryay.
Trump oo lala cararay xilli uu si toos ah shir jaraa'id uqabanayay.
Iska hor'imaad ka dhacay gudaha Xabsiga dhexe ee Xamar.
R/wasaarihii Lubnaan iyo Golihiisi xukuumadda oo iscasilaad ku dhawaaqay.
Weeraro safballaaran ah oo lagu qaaday saldhigyo ciidan oo kuyaal Jubbooyinka, Gedo iyo Sh/hoose.
Tuesday June 16, 2020 - 12:03:40 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dagaalyahannada Al Shabaab ayaa weerar madaafiic ah ku qaaday saldhig ay ciidamada shisheeyaha AMISOM uga sugnaayeen magaalada Beled Weyne ee bartamaha Soomaaliya.
Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in xalay fiidkii ay xoogaga Al Shabaab weerar loo adeegsaday madaafiic ku qaadeen saldhigga ugu weyn ee ciidamada Jabuuti ay ku leeyihiin dalka Soomaaliya.
Sida ay sheegeen dad ku sugan magaalada Beled Weyne tiro madaafiic ah ayaa ku hoobtay gudaha saldhigga ciidamada Jabuuti, dhawaqa qaraxyo dhowr ah oo ka dhashay madaafiicda ayaa laga maqlay inta badan xaafadaha magaalada Beled Weyne.
Wararka ayaa intaas ku daraya in ciidamada Jabuuti ay weerarka madaafiicda ah uga jawaabeen madaafiic kale oo ay urideen dhanka dhulka baadiyaha ah ee Beled Weyne ku hareeraysan.
Lama oga khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ciidamada AMISOM kasoo gaaray weerarkii xalay ka dhacay xarunta gobolka Hiiraan balse saaka markii uu waagu baryay ayay ciidamada Jabuuti howlgallo raaf ah ka sameeyeen Galbeedka iyo Bariga magaalada.
Dagaalyahanno Jihaadi ah oo 22 Askari ku dilay dalka Nigeria.
Al Shabaab oo sheegatay Mas'uuliyadda qarax lagu beegsaday saldhig melleteri oo kuyaal magaalada Muqdisho.
Dagaalyahanno Jihaadi ah oo weerar khasaara dhaliyay ka fuliyay degmada Luuq.
Ciidamada Al Shabaab oo lawareegay deegaan iyo salddhig ku dhow magaalada Baydhabo.
Qarax aad uxooggan oo ruxay magaalada Beyruut ee caasimadda Lubnaan.
Al Shabaab oo sheegatay Mas'uuliyadda Qarax ka dhacay degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho.
Sawirro: Sidaan ayay diyaaradaha Mareykanka Carruur ugu xasuuqeen degmada Jilib.
29/07/2020 - 17:51:40